रिसोग्राफी भनेको के हो? | क्रिएटिभ अनलाइन
रिसोग्राफी भनेको के हो?
मेरी गुलाब | | सामान्य
Risography एक मुद्रण प्रविधि हो जुन हाल सम्म अज्ञात थियोतर यसको फाइदाका कारण हालैका वर्षहरूमा यसको विकास भइरहेको छ। यसको अपरेटिङ सिस्टमको सन्दर्भमा, हामी भन्न सक्छौं कि यो कपियर, वा स्क्रिन प्रिन्टिङ प्रिन्टरको जस्तै छ। यस प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो फाइदाहरू मध्ये एक यो हो कि तपाईंले धेरै समय वा स्रोतहरू लगानी गर्नुपर्दैन। तिनीहरूको मुद्रणमा "त्रुटिहरू" राखेर, तिनीहरूले परिणाम हातले बनाएको जस्तो देखिन्छ।
पहिलो नजर मा, यो एक सरल प्रविधि हो, तर तपाईं धेरै कारक विचार गर्नुपर्छ। अन्तिम परिणाम प्रभावशाली छ, रंगहरूको तीव्रता, बनावट र सही समाप्तको लागि धन्यवाद। तर तपाईं कसरी हरेक दिन अनुयायीहरूलाई आकर्षित गर्नुहुन्छ?
1 रिसोग्राफी भनेको के हो?
2 रिसोग्राफीले कसरी काम गर्छ?
3 Risography को लाभ
4 risography प्रयोग गर्न को लागी आवश्यकताहरु
5 फाइल तयारी
यसले के समावेश गर्दछ la risography?
La Risography एक समतल, लगातार सतह मा एक उच्च गति डिजिटल मुद्रण प्रक्रिया हो। यो Riso Kagaku निगम द्वारा बनाईएको थियो। यो मुख्यतया ठूलो प्रिन्ट रन र फोटोकपी बनाउन सिर्जना गरिएको थियो। यसलाई प्रिन्टर-डुप्लिकेटर पनि भनिन्छ।
रिसोग्राफी को लागी, मोनोक्रोम मसी प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै फ्लोरिन गुलाबी र सुन्तला, सुन, बैजनी, पहेंलो, कालो, र फिरोजा। मसी पारदर्शी छ, अपारदर्शी छैन, त्यसैले यदि हामीले एउटा रङलाई अर्कोमा ओभरप्रिन्ट गर्छौं भने, तेस्रो रङ उत्पादन हुनेछ।
रिसोग्राफीले कसरी काम गर्छ?
"मास्टर" वा टेम्प्लेट मेसिनद्वारा स्क्यान गरिएको मूल आधारमा सिर्जना गरिएको हो। साना प्वालहरू थर्मल प्रणाली द्वारा बनाइएका छन् र मूल को क्षेत्र अनुरूप छन्। स्ट्यान्सिलले मसीको ड्रमको वरिपरि लपेट्छ र मसी सानो प्वालबाट बाहिर निस्कन्छ। जब ड्रम उच्च गतिमा घुम्छ, कागज प्रिन्ट प्राप्त गर्न मेसिनको भित्री भागबाट जान्छ।
यसको लागि प्रयोग गरिएको प्रिन्टर स्टेंसिल रोलर भएको मेसिन हो। यो एक स्थिर पङ्क्ति-जस्तै रेखा, प्रिन्ट लाइन, अगाडि र पछाडि सर्छ। छाप एक धेरै सानो विद्युतीय चार्ज संग बनाइन्छ जुन एक सकारात्मक चार्ज, एक ऋण को सहयोग संग सामग्री प्रवेश गर्दछ। una सिङहाँस्नe द्वारा una línea eléctरिका, una सिङहाँस्नe वैकल्पिकa o सिङहाँस्नe प्रत्यक्षa। Risography विभिन्न मा छाप्न सक्नुहुन्छ कागजात र आकारहरू, तर यी तिनीहरू अनकोटेड हुनुपर्छ र धेरै बाक्लो हुँदैन।
यसमा एकल प्रिन्ट लाइन हुन सक्छ, अर्थात्, यसले एक पटकमा एउटा मात्र लाइन छाप्छ। यो प्रविधिले राल बिना मसी प्रयोग गर्दछ, यो एक सोया आधार संग बनाइएको छ, जसमा वाष्पशील सॉल्भेन्टहरू छैनन्। यो विज्ञापन पोस्टर, क्याटलग, कार्ड, fanzines, आदि को उत्पादन मा प्रयोग गरिन्छ।
पोस्टर कसरी बनाउने
Risography को लाभ
तपाईं प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ कम लागतमा छोटो रन। प्रतिको संख्या जति धेरै भए पनि प्रति प्रतिलिपिको मूल्य त्यति नै कम हुन्छ।
यो प्रविधी मुद्रण प्रक्रियामा वातावरणको सम्मान गर्नुहोस्।
यो प्रिन्टर थोरै उर्जा खान्छ यसको चिसो प्रक्रियाको कारण।
प्राप्त छन् साँच्चै मूल भागहरू।
नतिजामा क 'हस्तनिर्मित' रूप हामीसँग स्क्रिन प्रिन्टिङ भएको जस्तै।
risography प्रयोग गर्न को लागी आवश्यकताहरु
यो प्रविधि प्रयोग गर्न, तपाईंले धेरै कारकहरू विचार गर्नुपर्छ:
तपाईंसँग छ प्रत्येक रङको लागि धेरै व्यक्तिगत डिजिटल कागजातहरू बनाउनुहोस्। यी कागजातहरू ग्रेस्केलमा हुनुपर्छ वा रङ पृथकीकरण प्रयोग गरेर गरिनुपर्छ।
सामान्यतः, तपाईंले छाप्न सक्ने कागज ढाँचा A4 वा A3 हो। यद्यपि त्यहाँ अन्य ढाँचाहरू छन्।
यस प्रकारको कागजात तिनीहरू ब्लीड प्रिन्टिङ स्वीकार गर्दैनन्। त्यसैले A4 मा मुद्रण क्षेत्र 19 x 27,7cm हुनेछ जबकि A3 मा यो 27,7 x 40cm हुनेछ।
यसको लागि कागजको वजन 50 र 210 ग्राम बीचको छ।
प्रिन्टरमा असमान मसी निर्माण, चिन्ह वा जाम रोक्नको लागि, यो मसी को ठूलो मास छोड्न सबै भन्दा राम्रो छ।
डिजिटल फाइलहरू तयार गर्दा तिनीहरूलाई मुद्रण कम्पनीमा पठाउन तिनीहरू PDF, JPEG, Illustrator वा InDesign ढाँचामा हुनुपर्छ। ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ कि फन्टहरू ट्रेसहरू र छविहरू इम्बेडेड हुनुपर्छ। रिसो मेसिनले रङहरूलाई ग्रेस्केलमा व्याख्या गर्छ तपाईंको फाइलहरू ग्रेस्केलमा हुनुपर्छ।
हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं, रङहरू पनि फरक फाइलहरू वा तहहरूमा अलग हुनुपर्छ। यदि तपाइँको फाइलमा मसीको ठूलो क्षेत्रहरू छन् भने, कालोमा 90% अस्पष्टता हुनुपर्छ, किनकि यदि तपाइँ एक भन्दा बढी पास दिन जाँदै हुनुहुन्छ भने, कागज जामबाट बच्न सकिन्छ। आखिरमा, यो सल्लाह दिइन्छ कि तपाईंले अन्तिम नतिजा प्रिन्टरमा पठाउनुहोस्, ताकि तिनीहरूसँग तपाईंको कामको लागि गाइड छ।
अब तपाईलाई यस प्रविधिको बारेमा अलि बढि थाहा छ र यो कसरी प्रेसमा पठाउन तयार छ। तपाईं यसको साथ प्रयोग गर्न र तपाईंको भविष्यका ग्राहकहरूलाई आश्चर्यचकित गर्न अद्वितीय र मौलिक टुक्राहरू सिर्जना गर्न तयार हुनुहुन्छ। अगाडि!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » रिसोग्राफी भनेको के हो?
Power Point मा डिजाइन विचारहरू